संघर्ष पछीको सफलता-गायिका सम्झना भण्डारी.. – Tufan Media News
संघर्ष पछीको सफलता-गायिका सम्झना भण्डारी..
२ मंसिर २०७६, सोमबार २३:००
ओम राज डाँगी, काठ्माडौं/ “मानिसको सफलता मा सबैले आँखा लगाउछ तर सफलता भन्दा पहिलाको सघर्षको बारेमा कसैले बुझ्न खोज्दैन्न केवल देख्छन त उस्को प्रगति मात्रै”।
नेपाली लोक दोहोरी क्षेत्रमा अहिले निकै चर्चामा रहेकी गायिका हुन सम्झना भण्डारी। तर उनले यहाँ सम्म पुग्न गरेको संघर्षले सबैलाई भाबुक बनाउछ । आउनुहोस आज चर्चा गरौ सम्झनाको संघर्षको बारे।
सम्झनाको जन्म लमजुङको सिमपानीमा एक सामान्य परिवारमा भएको हो । सानै उमेर देखी दुख र संघर्ष मा हुर्किएकी सम्झनाका बुवाले उनलाई सानै उमेरमा छोडेर जानुभयो ।बुवाले संसार छोडेपछी सम्झनाको परिवारमा ठुलो बज्रपात पर्यो। सम्झनाको बुवा ईन्डियान लाहुरे हुनुहुन्थ्यो ।पेनसन आउथ्यो, तर , उहाँले धर्ती छोडेपछी उक्त पेनसन आमाको नाममा गर्न थुप्रै समय लाग्यो ।झण्डै ६/७ बर्ष लाग्यो।
सम्झना भाबुक हुँदै सुनाउछिन आमाले हामिलाई हुर्काउन धेरै मेहनत गर्नुभयो।मेलापात गरेर जसोतसो हुर्काउनुभयो। सम्झना सानै देखि घाँस दाउरा मेलापात गर्दा गीतहरु गाउने गर्थिन। उनी सोच्थिन म कहिले टि.भी मा देखिने होला,मैले कहिले गीत गाउने होला? एस्तै एस्तै प्रस्नले उनलाई अक्सर सताई रहन्थे।
उनी स्कुल बाट हुने बिभिन्न सांस्कृतीक कार्यक्रमहरुमा सहभागी पनी हुन्थिन र बिजेता पनी, तर उनी पढाईमा भने खासै ध्यान दिदैन थिईन , बढी गीत संगीतमै रुची राख्थीन, त्यसै माथि घरको परिस्थिती पनी त्यस्तै थियो।आमा धेरै दुख गर्नुहुन्थ्यो,बुवाले छोडेर गयपछी गाउँलेहरुले हेप्थे पैसा हुदैन थियो। समाजमा कुरा काट्थे, कमाउने बाटो नभयपछी कसरी छोरा-छोरी पाल्छे होला? एस्तै एस्तै कुरा काट्थे गाउँ समाजमा, आमालाई धेरै पिडा हुन्थ्यो।
गाउँ नजिकै उदिपुर भन्ने ठाउमा सानिआमाको घरमा बसेर पढ्न आमाले अनुरोध गर्नुभयो , त्यस पछी सम्झाना सानिआमाको घर बसेर पढ्ने भईन तर सम्झनालाई त्यहाँ पनी सजिलो भने थियन , बिहानै उठ्थिन दैलो पोत्थिन अनी घाँस काटेर त्यस पछी स्कुल जान्थिन।
कहिले काही स्कुल पुग्दा ढिला भै सकेको हुन्थ्यो स्कुलमा १० बजेको घण्टी बजि सकेको हून्थ्यो। सरहरु रिसाउनु हुन्थ्यो किन ढिला आएको भनेर। भनिन्छ नी “जिबनको अर्को नाम संघर्ष हो भनेर” सम्झनाले निरन्तर संघर्ष गर्दै यसरीनै पढाईलाई अगाडि बढाई रहिन ।
सांगेतीक क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गरिन सम्झना?
लमजुङको सदरमुकाम बेशी सहरमा लोक तारको आयोजना भयको थियो, सम्झनाले त्यस कार्यक्रमा भाग लिने सोच बनाईन र घरमा कुरा गरिन आमाले जान अनुमती दिनुभयो तर दिदी र भाईले मान्नु भयन।त्यस पछी उनी झ्याँल बाट भागेर बेशीसहर पुगीन ।
त्यहाँ पुगे पछी सम्झनालाई थाहा भयो उक्त कार्यक्रममा भाग लिन गुन्यो चोली अनीवार्य लगाउनु पर्ने रहेछ, सम्झना संग पैसा थिएन। त्यस पछी उनले बेशिसहरमै बस्ने दिदी संग पैसा मागेर गुन्यो चोलीको ब्यबस्था गरिन र उक्त कार्यक्रममा भाग लिईन ।
टप १० सम्म पुगिन त्यस पछी उनी अगाडी बढ्न सकिन्न किनकी परिवारको साथ थिएन । त्यसपछी उनको एउटै सपना थियो अब काठ्माडौं जानु पर्छ। उनी भागरै मामा घर पुगिन र मामा संगै काठ्माडौं आईन। काठ्माडौं आउदा उनी संग जम्मा ५०० रुपैंया थियो। उनले दोहोरी साँझमा काम गर्ने निधो गरिन तर सम्भब भने भयन, उनलाई काठ्माडौं मा एउटा कोठा खोजेर बस्न असाधै गाह्रो भयो।
उनी काठ्माडौंमा सानिआमा नाता पर्नेको घरमा बस्न थिलिन, काठ्माडौंमा उहाँको आफ्नै घर थियो। त्यहाँ बस्दै गर्दा वरपरका साथिहरु संग चिनजान हुन थाल्यो त्यसै क्रममा उनको भेट चर्चित गायिक सम्झना लामिछाने मगरको बहिनी संग भयो। र सम्झना लामिछाने कै सहयोगमा उनले बागलुङ कालीका रोधिघरमा काम गर्ने मौका पाईन।
उनलाई दोहोरी साँझमा कस्तो हुन्छ केही थाहा थियन,त्यहाँ पुगे पछी थाहा भयो गुन्यो चोली लाउन पर्ने रहेछ, राम्री देखिनु पर्ने रहेछ, धेरै गाह्रो भयो उनलाई काम गर्न, उनले सुरुमा स्टेजमा गायको गीत मुना थापा मगरको “चिसो चिसो हावा सरर..” त्यस पछी उनको सबैले तारिफ गरे र निरन्तर त्यहाँ काम गर्न थालिन ।
कहिले भोक भोकै अनी कहिले पैदल हिड्दै उनी सामाकोशी बाट पुतलीसडक रोधिसम्म पुग्थिन। यसरी समझ्नाले कयौं दिन भोकै बिताएकी छिन।
यसरी संघर्ष गर्दै जादा बल्ल तल्ली केही पैसा जम्मा हुन थालेको थियो तर बिडम्बना दोहोरी साँझ बन्द भयो, त्यस पछी फेरी सम्झनालाई तनाब भयो अब काम कहाँ गर्ने । उनले बसपार्कको कान्तिमुर महलमा काम गर्न थालिन। तर त्यहाँ सम्झनालाई चित्त बुझ्दो ब्याबहार भयन र उनी ठमेलको फेवा रोधी कल्वमा काम गर्न पुगीन्।
त्यहाँ काम गर्दै गर्दा केही कलाकारहरु संग चिनजान भयो । काम गर्दै जाँदा केही महिना पछी उनलाई एउटा गीत गा उन अबसर जुर्यो गायक प्रकाश सपुत सङ्ग “तोरि भयछ” यो गीतले राम्रै सफलता पायो र साथमा बिभिन्न अग्रज कलाकारहरुको माया र सल्लाह पनी ।
यो गीत पछी सम्झनाले तिज कोशेली “मेरो माया बसेको गाउँमा ” गायक पशुपती शर्माको साथमा बजारमा लिएर आईन जुन गीत आज पनी उत्तीकै चर्चाको शिखरमा छ।यसरी सघर्ष गरेर यहाँ सम्म पुगेकी गायिका सम्झनाले अहिले सम्म दर्जनौं हिट गीतहरु बजारमा ल्याई सकेकी छिन। पछिल्लो समय उनको “कपालु कोरेर” बोलको गीत चर्चाको शिखरमा छ। सम्झनाको सांगेतीक यात्राले आझै सफलताको शिखर चुमोस हाम्रो “शुभकामान”